#INNPI (Zomi): Video Zomi
Showing posts with label Video Zomi. Show all posts
Zogam dongtuak vai Malaysia pan Fund zonna
Landslides and Flooded in Chin State and Kalay Myo
Posted by Innpi Page on Thursday, July 30, 2015
Zogam sung guahtui hanginakisia pawlkhat
Posted by Innpi Page on Friday, July 31, 2015
Tulsa, Full Gospel biakinn ah, Free Medical Health Service kipia
Full Gospel te in Tulsa Zomi te free medical service pia
Good Samaritan Mobile clinic pen mobile clinic (mawtaw tung aa zato) hi aa cina te omna phual dong va zuan in Zomi te tampi amawkna in damna na ngahsak khin uh hi.Full Gospel biakinn ah Monday ni sim in cina te in va kilak thei uh ahi hi.
Nu Ninghau Taithul pen hih clinic ah volunteer in asep zawh kum6bang cing ta ci hi. Zomi health insurance neilo tampi tak in hong zuan in 80% bang in damna ngah uh hi ci in aman gen hi.
Zomite tampi adam Nu Ninghau aa kipan doctor, nurse te leh volunteer teng tung lungdamna pulak hang. Topa'n hong zat toh sak lai ta hen
မြန်မာပြည်မှ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိသော ယုံကြည်သူများ (Full Gospel Assembly -FGA) မှ Tulsa, OK, USA တွင် Free Medical Health Care Service ပေးကာ insurance မရှိသောသူများနဲ့ insurance ရှိသူများကအစ အများကြီးတွက် ကောင်းကျိုးများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။Volunteers အနေနဲ့ Doctors, Nurses နဲ့ အဖက်ဖက်မှ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြရာ Nu Ning Hau Taithul လျင်လျှင် ဆေးရုံမှာ Volunteer လုပ်တာ ၆ နှစ်ပြည့်ပြီဟု ဆိုပါသည်။Brief History of FGA------------------------ဤအသင်းတော်မှ every Friday တိုင်း ရပ်ကွပ်အလိုက် homecell ရှိကာ တစ်လတစ်ကြိမ် combine service လုပ်ပြီး live နဲ့ internet မှတစ်ဆင့် အမြဲလွင့်ပါသည်။Every Sunday တိုင်းလည်း services လေးခုစလုံးကို quality ရှိရှိ internet မှတစ်ဆင့် ကြည့်လို့ရပါသည်။ Video cameras များစွာနဲ့ live mixer/editor machines များဖြင့် direct edit လုပ်ကာ live အမြဲလွင့်နေပါသည်။Praise and Worship နဲ့ ဘိတ်သိတ်ခြင်းများ ခံစားချင်ရင် >> http://www.fgatulsa.org/live-tv/FGA သည် မြန်မာပြည် မြို့နဲ့ရွာပေါင်း များစွာမှာ ရှိရုံသာမက ပြည်ပနိုင်ငံ တော်တော်များများမှာလည်း ရှိကာ၊ ထူးခြားမှုမှာဘယ်နိုင်ငံခြားအသင်းတော်၏ လက်အောက်၊ ဂိုဏ်းဂဏ တစ်ခုအဖြစ် လုံးဝရပ်တည်ခြင်းမရှိဘဲ ရန်ကုန် မြို့ပြင်ဘက်တွင် လူ၆ဦးဖြင့်သာ စတင်သော အသင်းတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါသည်။ (အနောက်အရှက် အခက်အခဲ ဟန့်တားခြင်းပေါင်းစုံမှ)ယနေ့တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အသင်းတော်ဖြစ်လာကာ ရန်ကုန်းမြို့ တစ်ခုတည်းတွင်ပင် အသင်းသား ၅၀၀၀ ကျော်ပြီး ပဲခူး၊ ရှမ်းပြည်၊ ချင်းပြည် etc... များတွင် လည်း အများကြီး ရှိနေပါသည်။ဧဝံဂီလိကို မြန်မာပြည်တွင် နှစ်တိုင်း (မမှား ရင် အယောတ်၈၀ ကျော်) မယုံကြည်သူများထံ နယ်စွံနယ်ဖျားထိ လိုက်လံဝေငကြပါသည်။ထို့ပြင် မီဒီယာဖြင့်လည်း အထူးသဖြင့် Music ပိုင်းမှ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။များသောအားဖြင့် သိနေကြသော သီချင်း ဆိုရင်ဧမာနွေလ (ထန်သောင်) ယေရှူးကြောင့်သာ အသက်ရှင်သည်။များစွာသော သီချင်းများဖြင့် ဘုရား ဘိတ်သိတ်ပေးကာ အသုံးပြုနေပါသည်။ပို၍သာ၍ လည်း ဘုရားရှင် အသုံးပြုပါစေ။ အာမင်။
Posted by Innpi Page on Tuesday, July 7, 2015
Rev.Thawngno (Sia Job Thawngno) -2015 @Chicago, USA
Sia Job Tawngno tangthu na sim nop leh >> Click
GZI (Global Zomi Idol) -2015 Highlights
Global Zomi Idol -2015
Global Zomi Idol -2015 (highlights)ဇိုမီးလူမျိုးများ ရောက်ရှိရာနေရာများတွင် နိုင်ငံနဲ့ဒေသ အလိုက် Zomi Idol Centers များ ဖွဲ့စည်းကာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြိုင်ဆိုရာမှ Final Round ကို Tulsa, OK, USA တွင် ကျင်းပနေစဉ်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ Zomi Idol Center ကို တီးတိန် နှင့် ရန်ကုန်တွင် ထားရှိပြီး Final Round တွက် US သို့ နှစ်ဦး သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေပါသည်။Please Like Us - Innpi Page Online Live ဖြင့် နေ့စဉ်ကြည့်ရှူသူ ထောင်ဝန်းကျင် အမြဲရှိပြီး Fb video နဲ့ YouTube တွင် ချက်ချင်းပဲ ပြန်လည် ကြည့်ရှူလို့ရပါသည်။ 1st Day & 2nd Day ထိ ပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။1st Prize = US$5000 + New Album + BonusZomi Idol Centers: Lamka -Manipur (India), Tedim, Yangon (Myanmar), Singpore, Malaysia, Norway(EU), US, Canada, Australia, etc...Zomi Idol News >>http://www.innpi.info/search/label/Zomi%20IdolYouTube (Innpi Videos) https://www.youtube.com/channel/UCrJw2hewJMeErBH8nUPCQPw?sub_confirmation=1
Posted by Innpi Page on Saturday, July 4, 2015
Leitungbup Zomi lasak kidemna Final Round interview
တဦးတည်းသော ကြိုးပေးခံ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ရုပ်သံမှတ်တမ်း
Posted by Innpi Page on Friday, June 26, 2015
Lia Cing Hau Lun, Japan sanginn khat ah thuagenna
Galpi2na lai aa, nungak Zomi khangham
Tg. Khuppi & Lia Zamnu @ Japan concert 2015
ဒါဟာလည်း ချင်းပြည်ရဲ့ အလှတစ်ခုပါ
(y) @Japan (ဒါဟာလည်း ချင်းပြည်ရဲ့ အလှတစ်ခုပါ)Tg. Khuppi & Lia Zamnuတာန် ခုပ်ပီး နှင့် လျာ ဇမ်နူး
Posted by Innpi Page on Monday, June 1, 2015
Video Zogam Life
UN khawmpi kah Zomi numeite leh Zomi Innkuan US Makaite holimna
Gilbem pan - India movie Zomi Version Trailer
1. ဟိုတစ်နေ့က coming soon ဆိုတဲ့ translated video တစ်ခု မထွက်သေးဘူး။ ခေါင်းစဉ်တောင် မသိရသေးဝူး။ဒီမှာ နောက်တစ်ခု Zomi version နဲ့ အစိုးရက မြေတွေသိမ်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတွေလုပ် တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ထားတာပါ။Credit: Thatuang SP Zomi2. Another one, Thai movie in Zomi version >> (title not known yet) https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/651941471605069/?type=1&theater3. Another one more, funny indian in Zomi version >> (A little star)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/651947108271172/?type=1&theater4. The other more in Zomi version>> (funny3guys - Penglam)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/651943831604833/?type=1&theater5. One more >> (love trees)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/651956888270194/?type=1&theater6. Other more >> (teaching)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/651949454937604/?type=1&theater7. Different one >> (one day president)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/595588577240359/?type=1&theater8. Zomi cartoon >> (Nantal -one of Zomi tale stories)https://www.facebook.com/innpipage/videos/vl.428793733961194/639891869476696/?type=1&theater 9. There are many more Thai funny movie in Zomi version.. we'll upload soon. Lungdam
Posted by Innpi Page on Thursday, May 21, 2015
Thai movie - Zomi Version thak
တစ်နှစ်မှာ ၄ ၊ ၅ ခွေ (ဇတ်လမ်း) လောက် ထွက်တဲ့ funny Zomi versiontitle: (not known yet)original: Thai Comedy and Scary Movie
Posted by Innpi Page on Tuesday, May 19, 2015
2015 Zomi Siamsin - US aa te sang manna
အတိုင်းမသိ ဂုဏ်ယူပါတယ် မျိုးဆက်သစ်တို့
Global Zomi Idol ( GZI ) lasaksiam kidemnavai thutangkona -1 May 2015
Zogam ah S-Korea pan free medical trips video
A lai inasim nuamte aa ding: